फूलपातीमा ‘छक्का पन्जा २’ र ‘मंगलम’ | Radio Langtang 90.3 Mhz
फूलपातीमा ‘छक्का पन्जा २’ र ‘मंगलम’
यसअघि सोलो रिलिज भनिएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ सँग चलचित्र ‘मंगलम’ले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । चलचित्र घोषणा भएकै दिन दीपक–दीपाले चलचित्रको प्रदर्शन मिती असोज ११ गतेलाई भनि टुङ्गो लगाईसकेका थिए । ‘छक्का पन्जा २’ सँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउन लागेको चलचित्र ‘मंगलम’ लाई छबिराज ओझाले निर्माण गरेका हुन् । प्रदर्शनको एक महिना पनि समय पनि बाँकी नराखी छविले चलचित्रको प्रदर्शन मिती असोज ११ टुङ्गो लगाएका छन् ।
पहिलो पटक निमात्रीको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन लागि परेकी नायिका शिल्पा पोखरेलको चलचित्र ‘मंगलम’ अहिलेको परिपेक्ष्यमा नेपालको सुपरस्टार ब्राण्ड ‘छक्का पन्जा २’ सँग प्रतिस्पर्धा गर्न लाग्दा बिभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरु काट्न थालिएको छ । चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ले प्रदर्शनको ३ महिना अगाडी देखी आफ्नो प्रचारप्रसारलाई तिब्रता दिएको छ भने ‘मंगलम’को अहिलेसम्म फस्ट लुक समेत सार्वजनिक भएको छैन ।
दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ दीपक राज गिरी, वर्षा राउत, प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, बुद्धि तामांग लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ भने । बाघ निर्माताको रुपमा आफ्नो छवि नबाएका छविराज ओझाले निर्माण गरेको चलचित्र मङ्गलममा शिल्पा पोखरेल, पृश्वीराज प्रसाईं र पुष्पल खड्काको लगायतका कलाकारहरु मुख्य भुमिकामा देखिदैँ छन् ।
निर्वाचन आयोगले आफैले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍यो
राजपाको मुख्य निशानामा माओवादी केन्द्र !
सिंहले पाँचौं र खड्काले पहिलोपटक मन्त्रीको शपथ लिए
६ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । संसदमा एक÷एक सिट भएका समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंह ...
महानगरसहित कास्कीको ३ तहमा एमाले र १ मा कांग्रेस अघि, कसको कति ?
कास्की, जेठ १ – पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासहित कास्कीका तीन वटा तहमा एमालेले अग्रता लिएको छ । रुपा गाउँपालिकामा भने नेपाली ...
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का बर्खास्त
सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अनियमितता गरको र विभागीय मन्त्रीलाई अटेर गरेको भेटिएपछि ...